Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Jordi Alba Tantara Momba ny Tantaram-pitiavana Tsy Manam-paharoa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "Moto GP". Ny Jorda Alba tantaran-tantaran'ny tantaram-piainan'ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa tafika an-tselika ry zareo avy aty aoriana. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra betsaka momba ny Bio Bio Jordi Alba izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Jordi Alba Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Jordi Alba Ramos dia teraka tamin'ny andro 21st mars 1989 tao L'Hospitalet, Espaina. Teraka tao amin'ny vondrona ethnic Catalan izy ho an'i reniny, Maria Jose sy ny rainy, Alba Miguel.
Ny maha-teraka sy nentina tao amin'ny tanàna faharoa lehibe indrindra ao Barcelone dia midika ho fahafahana haka baolina ho fialamboly iray noho ny tanàna fantatra kokoa amin'ny baolina kitra noho ny zavatra hafa rehetra. Little Jordi dia nihalehibe nilalao baolina niaraka tamin'i David Alba rahalahiny tany amin'ny manodidina an'i L'Hospitalet any Barcelone.
Nihalehibe izy, dia nahazo ny fianarany tany aloha tany amin'ny sekolim-pianarana Espaniôla izay nanome azy fahafahana Mafana fohy milalao baolina fifaninanana mandritra ny vanim-potoana ara-panatanjahantena. Tamin'ny taona 7 tamin'ny taona 1996, ny fianakavian'i Jordi Alba dia nanapa-kevitra ny hampandeha ny zanany handray ny baolina kitra ho asa. Tamin'io taona io ihany, i Jordi Alba kely dia nanomboka ny dian'ny baolina kitra miaraka amin'ny hopitalin'ny kolejy Catalonia. Izy no heverina fa kely indrindra, ny sahy sy ny kapitenin'ny ekipany no voamarika etsy ambany.
Raha manana fomban-drazana malaza amin'ny famelana ny mpilalao tsara indrindra ho any Le Masia (klioban'ny baolina kitra FC Barcelona), tsy afaka misalasala ny hamela ny mpilalao kintana hirotsaka hofidiana ny Hopitaly Hospitalense. Jordi Alba dia nandeha tany amin'ny Akademia baolina kitra Lemasia ary nanantena fanantenana. Na dia kely aza izy io, dia voafetra ihany ny fandrosoana, i Jordi dia naneho ny halaviran-drivotra izay naka fanahy ny mpitantana tanora tamin'izany fotoana izany hanaiky azy amin'ny fanantenana fa hihalehibe izy amin'ny taona ho avy.
Alba dia ny asany amin'ny laharam-pahamehana eo amin'ny tanora ao Barcelone ho mpihira havia. Nifankatia teo amin'ny klioba izy taloha. Ny iray amin'ireo fotoana tsy hay hadinoina dia midika aminy ny fisakafoanana miaraka amin'ny mpanazatra lefitra FC Barcelona taloha, Louis Van Gaal. Araka ny naseho tao amin'ny sary etsy ambany, samy nipetraka teo amin'ny latabatra ny resadresaka momba ny toerana tsara indrindra nataon'i Jordi tamin'ny baolina kitra.
Jordi Alba Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Miatrika ny fahasarotana sy ny fiakarana
Manana taham-pivoarana avo lenta sy fiaraha-miombon'antoka amin'ny Louis Van Gaal tsy manome antoka ny fankasitrahana ao amin'ny Akademia Le Masia ao Barcelona. Jorda Alba dia nanana olana lehibe. Ny maha-izy azy "Kely loatra". Na dia nihalehibe kokoa aza ny mpiara-milalao azy tamin'ny taonany, dia niharan-doza i Jordi. Izany dia niteraka adihevitra mavesatra teo amin'ny fitantanana Barça Infantil B ianao na dia ianao aza Lionel Messi no nahazo famelan-keloka. Tao 2005, i Barcelona dia namoaka an'i Jordi Alba noho ny fiheverany azy "Kely sy kely". Tsy dia fantany fa hiseho ao amin'ny Cup World 5 taona aty aoriana izy. Tsara ny manamarika izany Jamie Vardy dia nijaly toy izany koa ny tanora mpilalao baolina.
Noho ny fanentanana avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny zokiny lahy, i Jordi dia nandroso. Neken'ny vondrom-piarahamoniny Cornellà izy. Jordi Alba dia nanentana ny fanentanana avy amin'ny alahelony ary nahitana toky niaraka tamin'ireo mpiara-miasa taminy. Ny fihenan'ny fihenan'ny fihenan'ny fihenan'ny ala dia nirakotra tamina sombin-tsakafo haingam-pandeha. Tonga ihany koa ny fitomboana izay mifanaraka amin'ny fotoana iray i Jordi no nahazo ny solon'anarana "MotoGP"
Taorian'ny roa taona izay nahitana azy nihalehibe, nanapa-kevitra ny hametraka vola amin'ny takila havia ho an'ny vidin'ny € 6,000 i FC Valencia. Tao Valencia Jordi Alba dia nahavita ny asany tamin'ny fahatanorany taorian'ny fanampiana ny ekipan'ny tanora handray ny fampiroboroboana ao amin'ny Division Tercera.
Alba dia nanao ny lahasa matihanina tamin'ny seho 2008 / 2009. Ny fahombiazany teo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2010 FIFA dia nahasarika an'i FC Barcelone izay voalohany nangataka famindram-po sy famelan-keloka. Jordi Alba namela ny kliobany taloha ary niaraka tamin'izy ireo tao amin'ny 2012. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Jordi Alba Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Ny baolina dia hazo volamena, toerana izay i Jordi Alba tamin'ny fahatanorany no nahita alokaloka sy mampalahelo ka mahatonga azy ho olona ambony. Ankehitriny, bNipoitra io Espaniola lehibe io, izay nanakimpy ny masony tao am-pony.
Manomboka Jordi Alba amin'ny 2009 (tamin'ny taona lasa izy niditra tao amin'ny ekipa U20 Espaniola) dia nanomboka fifandraisana tamin'ny namany Mellisa Morilas. Melissa izay nandany ny 3 taona farany niaraka tamin'ny mpilalao baolina kitra dia mpianatra izy ireo ary nihaona tao amin'ny clubclub malaza tao Valencia izy ireo.
Ilay tovovavy espaniola miteny sangisangy dia nitazona an'i Jordi tamin'ny fanarahamaso akaiky ary tsy nanaja ny mason'ny hafa. Ny dikany dia midika fa mpandefitra be zotom-po izy. jordi dia niteny ihany koa fa manana olana ara-batana izy ary mitondra azy toy ny zazakely araka izay hita avy amin'ny sary etsy ambany.
Nolazain'i Mellisa indray fa afaka mahita an'i Jordi izy "Manetry tena ary tena be fitiavana amin'ny FITIAVANA". Indray mandeha izy dia nanambara tamin'ny gazety Espaniola fa ny sipany "Mandrakariva mandrakariva amin'ny Fanaraha-maso sy ny fandriam-pahalemana". Ny fanaraha-maso tsy tapaka nataon'i Melisa raha nandeha ny fotoana dia tsy nandeha tsara niaraka tamin'i Jordi Alba. Izany dia niafara tamin'ny fifaranan'ny fifandraisana izay naharitra efa-taona.
Tao amin'ny 2014, taona nisian'ny baolina kitra FIFA, dia nanomboka nampiaraka tamin'i Romarey Ventura i Jordi. Niara-niasa teo anoloan'ny 2014 izy ireo saingy nolavina aloha ny resaka.
Romarey dia avy any Séville. Mpianatra tao amin'ny oniversite izy taloha ary nandray anjara tamin'ny famolavolana. Nifampizaran'ireo sary maromaro niaraka tamin'ny sarimihetsika maromaro (sary maranitra maromaro) ny mpivady nandritra ny fotoana kelikely raha niely izy ireo fa nifankatia.
Ankoatra izany, Romarey Ventura dia manana fifandraisana tsara amin'ny rahavavin'i Alba (vadin'i David).
Indray andro, i Jordi sy Romarey dia naniry ny hampiseho ny fahasambarany amin'ireo mpankafy. Tahaka ny tamin'ny 2017 tamin'ny volana Aogositra, dia bevohoka tamin'ny zanany voalohany i Romarey Ventura. Namoaka sary tao amin'ny Instagram izy niaraka tamin'i Alba tao aminy izay nanohina ny vavony. "Feno fitiavana" nanoratra izy.
Tokony ho faly ny ray aman-drenin'i Alba satria i David rahalahiny koa dia miandry zaza iray miaraka amin'i Carol vadiny amin'ny fotoana iray. "Toa samy nomanina izany"
Jordi sy Romarey dia i Piero lahy voalohany indrindra tamin'ny 18th of January 2018.
Jordi Alba Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Ny fiainan'ny tena manokana
Tao amin'ny tafatafa nataon'i Jordi Alba niaraka tamin'i Mundo Deportivo, dia tsy maintsy namaly fanontaniana momba ny fiainany manokana ihany koa ny mpanohana azy. Ohatra…Alba dia niaiky fa matory amin'ny ora 12 isan'andro!. Ireto ambany ireto ny fotoam-panontaniana Q sy A manaraka.
Q: Inona ny fiainanao mahazatra ao amin'ny Hospitalet?
Jordi Alba namaly hoe: "Niaina tany aho, nankany amin'ny sinema, trano ivoho na trano fandraisam-bahiny. Mankany amin'ny teatra "Joventut" aho, izay ataon'ilay renin'ny reniko ".
Q: Fanatanjahanao ve ianao?
Jordi Alba namaly hoe: "Tiako ny milalao azy ary ataoko foana izany miaraka amin'ny raiko. Izany no mahatonga ahy hieritreritra ary izany no mahatonga ahy hieritreritra hoe mahafinaritra tokoa ny ampianarina any an-tsekoly ".
Q: Tena sambatra ve ianao 12 ora?
Jordi Alba namaly hoe: "Afaka matory mandritra ny ora 12 na 13 aho. Amin'ny alina aho dia manao izany avy amin'i 12am mankany 9am ary manana kapa amin'ny 2,3 na 4 ora amin'ny tolakandro aho "
F: Moa ratsy ve ny salady?
Jorda Alba namaly: "Mampidi-doza ahy ny salady. Izaho mihinana azy mandritra ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva ... Tsy vitako amin'ny sakafo maraina fa faly amin'ny salady aho, akoho kely sy vary. Misotro rano rano 3 isan'andro aho ".
Q: Mpankafy mozika ve ianao, angamba i Kevin Roldan?
Jordi Alba namaly hoe: "Tiako ny rumba sy ny" flamenco ". Kevin Roldan? Tsy fantatro hoe iza izy "
F: Tianao ve ny televiziona?
Jordi Alba namaly hoe: "Tiako ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Espaniola" La que se avecina ". Azoko jerena in-dimy monja ilay horonan-tsary ary mihomehy foana aho ".
Farany, eo amin'ny Fiainam-piainana ao Jordi Alba, izy no lazaina fa ambasadaoron'i Braun ary mampiroborobo ny vokatra. Manana fiara malaza maromaro izy, anisan'izany i Audi.
Jordi Alba Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Loka manokana
Alba dia nahazo ny lohatenim-baovao sy iraisam-pirenena. Talohan'ny fizaràn'ny 2017 / 2018, nanampy an'i FC Barcelone hoan'i La Liga sy Copa del Rey in-efatra izy. Nahatratra ny Supercopa de España indroa sy ny Fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny 2015 izy. Nahazo ny Ligin'ny UEFA Champions League sy ny UEFA Super Cup tao 2015 ihany koa i Barcelona. Ankoatra ny fahombiazan'ny klioba dia nahazo mari-pankasitrahana maro izy hatramin'izao. Ny sasany amin'ireo mari-pankasitrahana faran'izay manan-danja amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
UEFA Euro ekipan'ny tennis: 2012
FIFPro World XI: ekipa faharoa , ekipa fahatelo [2013, 2014 ary 2016]
UEFA Champions League: ekipan'ny fizaran-taona [2014-15]
La Liga: ekipan'ny fizaran-taona [2014-15]
Jordi Alba Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Style of Play
Alba dia fitaovam-piadiana ara-teknika tena goavana sy haingam-pandeha haingana izay azo ampiasaina koa ho toy ny mpihazo havia. Ny paikadiny sy ny heriny dia mamela azy ho tena tafiditra amin'ny heloka bevava sy ny fiarovana satria izy dia afaka miditra avy hatrany amin'ny tendrony iray mankany amin'ny iray hafa.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Jordi Alba momba ny tantaram-pianakaviana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Hector Bellerin Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra